DEG DEG: Waraaqado Hanjabaad ah oo lagu daadiyay Muqdisho iyo Warar Sheegaya in - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DEG DEG: Waraaqado Hanjabaad ah oo lagu daadiyay Muqdisho iyo Warar Sheegaya...
DEG DEG: Waraaqado Hanjabaad ah oo lagu daadiyay Muqdisho iyo Warar Sheegaya in
Ururka Al Shabaab ayaa la sheegay in degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ay ka mamnuuceen xirashada Af saabka kaasi oo ay kaga soo hor-jeedaan Amarka maamulka Gobolka Banaadir ee ahaa in $5 Dollar lagu ganaaxayo shakhsiga aanan xiran.
Ilo katirsan Laamaha Amniga ah ayaa sheegay in dagaalamayaashu habeen ka hor waraaqado mamnuucaya Af-Saabka ay ku daadiyeen Degmooyinka dhaca waqooyiga Muqdisho.
Sidoo kale waraaqadaha ayaa ku qornaa in ciddii lagu arkaa gafuur xirka ay kaga dhufanayaan madaxa 5 xabadood taasi oo beddel u ah sida ay sheegeen 5ta dollar ee maamulka Gobolka Banaadir ku ganaaxi lahaaa.
Dadka jooga wixii ka dambeeya wadada wadnaha ilaa xera maslax ayaa ku sheegaya in cabsi dartii aysan uxiran karin gafuurka xirka (Face mask) maadaama al shabaab ay ku hanjabeen dil.
Hadalka hanjabaada ee Al shabaab ayaa ku soo aadaya kadib markii Maamulka Gobolka Banaadir ay soo saareen awaamiir la xiriirta Xirada Afsaabka Kuna Amartay in Cidii 15 Bishaani Xiran weysa laga qaadi doono Lacag gaareysa $5 Dollar.
Wali kama aysan hadlin Hay’adaha Amniga Dawlada Dhexe iyo Maamulka Gobolka oo ku saabsan Hanjabaada Al shabaab ee ku aadan Xirashada Afsaabka Shacabka Soomaaliyeed ayaana hadda wajahayo culeesyo badan oo kaga imaanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya Iyo Al shabaab.
Inta badan Shacabka Muqdisho ayaana xiran Af Saabka sababta lama oga inay ka cabsi qabaan Hanjabaada Al Shabaab iyo in aysan awoodin inay soo iibsadaan.